September | 2016 | TAJBIJ.COM | Page 2
पत्रकार खनालमाथि अज्ञात समूहबाट भएको साँघातिक आक्रमणको निन्दा !
September 30, 2016 तजबिज खबर	Leaveacomment
काठमाडौं, २०७३ असोज १४ । पत्रकार कृष्ण खनालमाथि मंगलबार राति ललितपुर, ग्वार्कोमा अज्ञात समूहले सांघातिक आक्रमण गरेको छ ।उनी मिडिया नेपालका केन्द्रीय सदस्य हुन ।
पत्रकार खनालको बीएन्डबी अस्पताल ग्वार्कोमा सघन उपचार कक्षमा उपचार भइरहेको छ । उनको टाउकोमा गम्भीर चोट लागेको छ । खनालको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेको अस्पतालले जनाएको छ ।
यसैबीच मिडिया नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार खनालमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गरेको छ । अध्यक्ष गोपाल पौड्यालले विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार खनालमाथि भएको आक्रमणले मिडिया नेपाल स्तब्ध भएको जनाएका छन् ।
‘यस्तो अमानवीय र क्रुर घटनाको मिडिया नेपाल घोर भत्र्सना गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस्तो अपराधिक, अमानवीय र क्रुर घटनामा संलग्न अपराधीलाई तुरुन्त पत्ता लगाई कारवाही गर्न नेपाल सरकार, नेपाल प्रहरीलाई अनुरोध गर्दछौं ।’
यसैगरी राप्रपा नेपालले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै पत्रकार खनालमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गरेको छ । पार्टीका सह–प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठव्दार हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा ‘पत्रकार खनालमाथि अज्ञात समूहद्वारा भएको सांघातिक हमलाको राप्रपा नेपाल घोर निन्दा एवं भत्सर्ना गर्दछ ।’ भनिएको छ ।
विज्ञप्तीमा अगाडी भनिएको छ,यसप्रकारको क्रुर र अमानवीय आक्रमणको जति निन्दा गरेपनि कम हुने भन्दै राप्रपा नेपालले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘प्रेस जगतले निर्वाध ढंगबाट काम गर्न पाउनु पर्नेमा राप्रपा नेपालले सदा जोड दिदै आएको छ ।’
घटनाका दोषी पत्ता लगाइ अबिलम्ब कारबाही गर्न, क्षतिपूर्ति दिलाउन तथा पत्रकार खनालको उपचारको व्यबस्था गर्न राप्रपा नेपालले सरकारसँग मागसमेत गरेको छ ।
सामुदायिक सेवा केन्द्रव्दारा रामरेखामा सरसफाई कार्यक्रम !
बिक्रम सुनार बागलुङ २०७३ असोज १४ । नेपालीहरुको महान चाड विजया दशमीको अवसरमा सामुदायिक सेवा केन्द्र बानपा–१ रामरेखाले बिहीबार रामरेखाका बिभिन्न स्थानमा सरसफाई गरेको छ ।
केन्द्रको नियमित रचनात्मक कार्यक्रम अन्तर्गतत सामुदायिक सेवा केन्द्र, जिल्ला वन कार्यालय परिसर, भ्यु टावर हुँदै बिद्युतको सव स्टेशन सम्म सडक छेउछाउका प्लाष्टिकजन्य फोहोरहरुको व्यवस्थापन गरिएको हो ।
सो अवसरमा बोल्दै प्रहरी नायव उपरिक्षक अनिलकुमार खड्काले सामुदायिक सेवा केन्दको सरसफाई एवं शान्ति सुरक्षा प्रर्वद्धन गर्न महत्वपूर्ण भुमिका रहेको बताउदै सरसफाई लगायतका कार्यलाई आगामी दिनहरुमा पनि निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सेवा केन्द्रका कावा अध्यक्ष दुर्गाबहादुर आचार्यले केन्द्रले लागु औषध दुव्र्यसन, सरसफाई तथा सचेतना सम्वन्धी बिभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको जानकारी दिएका थिए ।।
केन्द्रका कार्यवाहक अध्यक्ष आचार्यको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष जीतबहादुर बोहराको स्वागत र महासचिव शम्भु आचार्यको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो ।
ग्वालिचौरमा एम्बुलेन्स अभियान :थानापति क्लबव्दारा दशैँको भव्य तयारी !
September 28, 2016 तजबिज खबर	Leaveacomment
प्रकाश घिमिरे/अनिश शर्मा गैरे, बागलुङ २०७३ असोज १२ । ‘समाज सेवा नै मानव धर्म हो’ भन्ने मुल नाराका साथ ग्वालीचौर समाज कल्याण केन्द्रले एम्बुलेन्स खरिद अभियान शुरु गरेको छ । बर्षेनी एम्बुलेन्स नभएकै कारण ज्यान गुमाउन बाध्य स्थानीयहरुको समस्यालाई मध्यनजर गर्दे यस्तो अभियान शुरु गरिएको केन्द्रका अध्यक्ष रामशरण घिमिरेले तजबिज खबरलाई बताए ।
समाजले अहिले आफ्नै नेतृत्वमा सहयोग संकलन कार्य अगाडी बढाउने र बिदेशमा साथीभाइ तथा केन्द्रमा आबद्ध ब्यक्तिहरुलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको क्लबका संयोजक प्रदिप खरेलको भनाई छ । हालसम्म करिब १ लाख ५० हजार सहयोग संकलन भैसकेको र २ लाख रुपैया केन्द्रको आफ्नो आन्तरीक कोष गरि करिब साढे ३ लाख रुपैया आर्थिक ब्यबस्थापन भैसकेको समेत खरेलले बताए । उनले देश तथा बिदेशमा आर्थिक संकलन गर्नको लागि बिभिन्न ब्यक्तिहरुलाई नृतत्व प्रदान गरिएको पनि जानकारी दिए ।
यसैबीच थानापति समाजकल्याण संस्था ग्वालीचौर ८ दाँग बागलुङ्ले आफ्नो १९ औ बार्षिकोत्सब तथा बिजया दशमी तथा शुभ दिपावलीको अवसरमा बिबिध खेलकुद, मनोरञ्जनात्मक सास्ँकृतिक कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ ।
संस्थाले यही असोज १४ गतेदेखी १९ गते सम्म बिबिध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्न लागेको हो । संस्थाका अध्यक्ष चक्र बुढाले दिएको जानकारी अनुसार भलिबल, रेकर्ड डान्स, अभिभाबहक कुर्सी दौड प्रतियोगीता, घैटोफोर लगायतका कार्यक्रमहरुको आयोजना गर्न लागेको हो ।
कार्यक्रमको उद्देश्य युवाहरुलाई खेल क्षेत्रमा सक्रिय बनाउनुका साथै स्थानीय तथा नवदित कलाकारहरुलाई प्रात्साहन गर्नु रहेको बताइएको छ । कार्यक्रममा कलाकारहरु मनोज घिमिरे, छबि राकसकोटी, कल्पना परियार लगायतका कलाकारहरुले सास्ँकृतिक प्रस्तुती देखाउने कार्यक्रमका आर्थिक संयोजक राम प्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए ।
यो कार्यक्रम आयोजना गर्नको लागि संस्थाको लागि स्वदेश तथा बिदेशमा रहेका बिभिन्न ब्यक्तिहरुद्धारा करिब ३ लाख बराबरको सहयोग प्राप्त भएको संस्थाका सचिब चिरञ्जिवी घिमिरेले बताए । यसरी संकलित रकम सामाजिक बिकासका कार्यहरुमा प्रयोग गरिने सचिब घिमिरेको भनाइ छ ।
२०५४ सालमा स्थापना भएको यस क्लबले समाजको हितका लागि कामहरु गर्दै आएको छ ।
तलब बृद्धिको मागगर्दै तल्लो मोदी आयोजनाका मजदुर हड्तालमा उत्रिए !
September 28, 2016 महेन्द्र के सी	Leaveacomment
महेन्द्र केसी, पर्वत २०७३ असोज १२ । निर्माणधिन तल्लो मोदीखोला जलविद्युत आयोजनाका मजदुरहरु आन्दोलित भएका छन् । तलब बृद्धिको माग गर्दै दुई दिनदेखि मजदुरहरु आमहड्तालमा उत्रिएका हुन् ।
मजदुरहरुले २५ प्रतिशत तलब बृद्धि, सुरक्षाको ग्यारेण्टीका साथै जिवन विमाको माग गर्दै आन्दोलनमा होमिएका हुन् । आयोजना अन्तरगतको अम्बोटमा रहेको सुृरुङमार्ग निर्माणका मजदुरहरु आन्दोलित भएका हुन् । साउथ एसियन इन्फेक्टर प्रालिले मजदुरहरुको ९ प्रतिशत तलबभत्ता बृद्धि गरेतापनि मजदुरले सरकारले बृद्धि गरेको तलबभत्ता अनुरुप आफुहरुले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । बुधबार विहान कम्पनी र मजदुरविच बार्ता भएता पनि विना निश्कर्ष बार्ता टुंगिएको छ ।
आयोजना अन्तरगतको उक्त शुरुङमार्ग निर्माणकार्य जारी छ । साउथ एसियनले ४.२ किमि शुरुङ मार्ग निर्माणको लागि मनाङ ट्रेड मार्फत ठेक्कामा लिएको थियो जसको ४ सय ४५ मिटर शुरुङ निर्माण गर्नको लागि बाँकी रहेको छ । ठेकेदार कम्पनीले १५ दिनभित्र माग सम्बोधन गर्ने बताएको थियो तर माग सम्बोधन नभएपछि आन्दोलनमा होमिएको कृष्ण बहादुर लामिछानेले बताए । लामिछानेको नेतृत्वमा संघर्ष समिति गठन गरेर अहिले मजदुरहरु आन्दोलनमा होमिएका छन् । तीन बजे पुन बार्तामा बस्ने बताइएको छ ।
जापानका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण होस भन्ने नेपाली जनताको अपेक्षा !
पूर्व उपप्रधानमन्त्री थापा तथा जापानी विदेश राज्यमन्त्री नोबुओ वीच शिष्टाचार भेट !
तजबिज खबर,जापान टोकियो, २०७३ असोज १२ । । जापान भ्रमणमा रहेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले आज बुधबार जापानका विदेश राज्यमन्त्री किसी नोबुओसँग शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।
सो भेटमा पूर्व उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थापाले नेपालमा गएको महाभुकम्प पश्चात जापान सरकारले गरेको उद्धार, राहत र पुर्ननिर्माणमा पुर्याएको सहयोगको प्रशसा गदैँ आगामी २०२० मा हुनगईरहेको ओलम्पिकका लागि आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण र कृषि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने जनशक्ति नेपालबाट निर्यात गर्न आग्रह गरे ।
यसैगरी आभुकम्प पश्चात पुनःनिर्माणको काम शुरु भईरहेको र थप निर्माणका लागि आगामी दिनमा पनि जापान सरकारको निरन्तर सहयोग र सद्भावको अपेक्षा गरे ।
नेपाल जापान कुटनीतिक सम्बन्धको ६० औं बर्षगाँठको अवसरमा जापानका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण होस भन्ने नेपाली जनताको अपेक्षा रहेको भेटका क्रममा थापाले राज्यमन्त्री नोबुओलाई जानकारी गराएका थिए ।
सो अवसरमा राज्यमन्त्री नोबुओले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्नका लागि जापान सरकार सदैव तत्पर रहेको प्रतिवद्धता व्यक्त्त गर्दै नेपालको संविधान कार्यान्वयन होस भन्ने जापान सरकार र जापानी जनताको अपेक्षा रहेको बताएका थिए ।
जापानी प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण, नेपाली जनताले चाहेको बिषयमा राज्यमन्त्री नोबुओले खुसी व्यक्त गर्दै यसबारेमा आफ्नो प्रमलाई जानकारी गराउने विश्वास दिलाएका थिए ।
सो भेटका क्रममा जापानका लागि नेपाली कार्यबहाक राजदूत कृष्ण चन्द्र अर्याल, राप्रपा नेपालका केन्द्रिय सल्लाहकार राजाराम बर्तौला, कलेन्द्र विक्रम शाही समेतको उपस्थिति रहेको थियो ।
मुस्ताङमा दशैँमा मात्र भेडाच्याङग्राको रु. ४० करोडको कारोबार !
September 28, 2016 केशव बिश्व	Leaveacomment
केशव बि.क., मुस्ताङ, २०७३ असोज १२ । चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा च्याङग्रा खरिद बिक्रीको चहलपहल सुरु भएको छ । नेपालीहरुको महान पर्व दशैँतिहारलाई लक्षित गरेर हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा भेडाच्याङ्ग्रा किनबेच सुरु भएको हो । मुस्ताङकै स्थानिय व्यापारी र बाहिरी जिल्लाका व्यापारीहरुले भेडाच्याङ्ग्रा खरिद बिक्रि गर्न सुरु गरेका छन् ।
च्याङग्रा व्यापारीहरुले किसानको गोठमा पुगेर भेडाच्याङग्रा खरिद गरिरहेका छन् । रामेछापका उद्धव खडका र रसुवाका रामप्रसाद न्यौपानेले दशैँमा बिक्री गर्नको लागि ४ सय भेडाच्याङग्रा खरिद गरेका छन् । दशैँमा मासुको अत्याधिक माग हुने भएकाले बजारमा बेच्नको लागि उनीहरुले मुस्ताङमा आएर भेडाच्याङग्रा खरिद गरी देशका विभिन्न ठाउँमा लगेर बिक्रि गर्नेे तयारी गरेको बताए । ‘हामी २ जनाले करिब ८० लाख बराबरका च्याङग्रा किनेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब यसलाई विभिन्न ठाउँमा लगेर बिक्री गर्छाै ।’
त्यस्तै रसुवाका व्यापारी दिवाकर न्यौपाने पनि भेडाच्याङग्रा खरिदका लागि मुस्ताङ आएका छन् । न्यौपाने सहित तीन जनाको समुह मुस्ताङ आएको हो । ‘किसानको घर—घरमा पुगेर खरिद गरिरहेका छौँ,’ न्यौपानेले भने, ‘चार सय संकलन गरेर लैजान्छौँ ।’ उनीहरुले सडकबाट हिँडाएर भेडाच्याङग्रा बिक्री गर्दै जाने बताए । दशैँतिहारमा अत्याधिक माग हुने मुस्ताङमा पालेका भेडाच्यङग्रा किनबेचको सिजन सुरु भए पछि किसान पनि बेच्न उत्साहित छन् ।
मुस्ताङमा यस वर्ष करिब २५ हजार भेडाच्याङग्रा बिक्री गर्नको लागि तयारी अवस्था रहेको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ । किसानले प्रतिगोटा १९ देखि २१ हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन् । चार वर्ष उमेर पुगेर बेच्ने अवस्थामा करिब २५ हजार भेडाच्याङग्रा रहेको पशु कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख डा.नन्दलाल बर्माले बताए । ‘दशैँलाई लक्षित गरेर भेडाच्याङग्रा किनबेच सुरु भएको छ,’ बर्माले भने, ‘२५ हजार मुस्ताङबाट निर्यात हुने अनुमान गरिएको छ ।’
जिल्लामा ४१२ किसानले ब्यवसायिक रुपमा भेडाच्याङग्रा पाल्ने गरेका छन् । मुस्ताङको १६ गाविस मध्ये मार्फा, जोमसोम, कागवेनी, झोङ, मुक्तिनाथ, छुसाङ, सुर्खाङ, चराङ, लोमान्थाङ, छोसेर, छोन्हुप गाविसका किसानले च्याङग्रा पाल्दै आएका छन् । मुस्ताङमा उत्पादित भेडाच्याङग्राले बजारको माग थेग्न नसक्ने भएपछि चाडपर्वलाई लक्षित गरेर व्यापारीले तिब्बतबाट समेत भेडाच्याङग्रा ल्याउने गरेका छन् । उपल्लो मुस्ताङका घमी, लोमान्थाङ, चराङ, सुर्खाङ, छोसेर र छोन्हुपका व्यापारीले तिब्बतका भेडाच्यांग्रा ल्याएर स्थानिय भेडाच्याङग्रामा मिसाएर बेच्छन् । यस वर्ष गत भाद्रमा संचालित अन्तरदेशीय व्यापारमेलाबाट यहाँका व्यापारिले करिब १० हजार च्याङग्रा खरिद गरेका छन् । लोमान्थाङका स्थानिय समाजसेवी इन्द्रधारा विष्टले बताए ।
बजारमा हिमाली उच्च चरन क्षेत्रका भेडाच्यांग्राको माग हुने भएकोले मुस्ताङीले तिब्बतबाट ल्याएका भेडाच्याङग्रा मिसाएर बेच्ने गर्छन् । यहाँका भेडाच्याङग्राको मासु स्वादिलो हुने गरेकाले पनि मासु पारखीको रोजाईमा पर्ने गरेको छ ।
मुस्ताङबाट गत वर्ष १९ हजार भेडाच्याङग्रा निर्यात भएको जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, मुस्ताङले जनाएको छ । मुस्ताङका किसानले गत वर्ष १९ हजार भेडाच्याङग्रा बेचेर करिब ३६ करोड कमाएका थिए । किसानले भेडाच्याङग्राबाट मनग्य आम्दानी गर्ने गरेका छन् । हाल जिल्लाभरमा ७० हजारको हाराहारीमा भेडाच्याङग्रा रहेको डा. नन्दलाल बर्माले बताए ।
मुस्ताङबाट भेडाच्याङग्रा खरिद गरी व्यापारीले बिक्रीको लागि बागलुङ, पर्वत, पोखरा, काठमाण्डौ लगायतका ठाउँमा लैजान्छन् । केही किसानले आँफै म्याग्दी, बागलुङ, पर्वत, पोखराका बजारमा लगेर बेच्ने गरेका छन् ।
कार्यालयको सम्पर्कमा आएका किसानको भेडाच्याङग्रा निकासी हुँदा अनिवार्य स्वास्थ्य जाँच गरेर पठाउने गरेको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल खाद्य संस्थानले करिब एकहजार पाँचसय भेडाच्याङग्रा काठमाण्डौ लैजाने भएको छ । संस्थानले भेडाच्याङग्राको व्यवस्था गर्नको लागि जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, मुस्ताङलाई पत्राचार गरेको छ । र केही च्याङग्राहरु पठाईसकेको बताईएको छ ।
अन्य समाचार, फिचर
हे, त्रिशुली ! नढाँटी भन, तिमीले कति मानिसहरु निल्यौं प्रिय ?
कुनै समय नेपालमा दैनिक लडाई हुन्थे र मानिसहरु दैनिक मर्थे । समाचारका ठुला ठुला हेडलाईनहरु बन्थे र भनिन्थ्यो आज फलानो ठाउँमा माओवादी आतंककारीहरुको आक्रमणबाट यति जना नेपाली सेना, प्रहरी वा सशस्त्रका वीर जवानहरुले वीरगती प्राप्त गरे । उस्तै माओवादीहरु तर्फ यति जनाको मृत्यु हुनुको साथै सयौंको संख्यामा हताहत भएको खबर छ । भन्दा मन निकै भावबिह्वल हुन्थ्यो अनि लाग्थ्यो यो देशमा मानिसहरु कहिलेसम्म मर्नु पर्ने होला । त्यो १०÷१२ बर्षकोे अबधीमा अनेक बहानामा हजारौं नेपाली आमाका सपुतहरु मरे आज धेरैको पारिवारीक बिचल्ली भएको दैनिक संचार माध्यममा सुन्न र पढ्न पर्दा बिगत संझिएर पीडा हुने गर्छ । धेरै मानिसहरु समाज रुपान्तरणको नाममा मरे । तिनीहरुको आज कोहि शहिदको रुपमा पुकारिएका छन् कोहि कुनै पार्टीको झण्डाले छोपिएका छन् । यी राजनैतिक कुरा भए ।
तर यहाँ उठाउन खोजिएको गम्भिर कुरा राजनैतिक होईन त्रिशुली नदीको हो । जहाँ सडक दुर्घटनाको नाममा दैनिक जसो मानिसहरु मरिरहेका छन् । प्रिय त्रिशुली यो देशमा राजनैतिक तथा सामाजिक रुपान्तरणको लागि हजारौंको बलिदानी भएको कुरा तिमीलाई राम्रैसँग थाहा छ । तर तिमी किन केहि कुरा थाहा नभएजस्तो गरि हरेक समय नेपालीहरुलाई झस्काउने गरेर गाडीका गाडी मानिसहरुलाई आफ्नो शिकार बनाएकी छौं । अब तिमी बोल, कहिलेसम्म तिम्रो काखबाट हिड्दा हामी नेपालीहरुले असुरक्षित महसूस गर्नु पर्ने हो ? तिमी किन दिन प्रतिदिन यति निर्दयी बन्दै गएको ? तिमीले निलेका कैयौं मानिसहरु अहिले कहाँ छन् ? यसको जवाफ हामीले पाउने कि नपाउने ? देशको लागि भन्दै मरेकाहरुको लागि भन्दै बेपत्ता आयोग बनाइएको छ । तिमीले निलेका मानिसहरु खोज्न हामीले के नाममा आयोग बनाउने ? जसको कारण तिम्रो काखमा हिँड्दा हामीहरु सुरक्षित महसूस गर्न पाईयोस् ।
प्रिय त्रिशुली, २००७ सालमा सयौं मानिसहरु मर्दा देशले प्रजातन्त्र पायो, २०२८ सालमा झापा बिद्रोह गर्दा नेपालमा सामाजिक रुपान्तरण भयो । २०३६ सालमा नेपाली जनताको आन्दोलनले जनताको पक्षमा बहुदलीय शासन ब्याबस्थाको लागि अगाडी बढ्ने शाहस पायो । २०४६ सालको आन्दोलनले नेपाली जनताको लागि जनताका प्रतिनिधीले बनाएको बिश्वको उत्कृष्ठ संबिधान पायो । २०५२ देखिको माओवादी युद्धले झण्डै १४ हजारमा मानिसहरुको ज्यान लियो साथै २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले केहि मानिसहरुको बलिदानीबाट नेपालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पायो । तर तिमीले भने हरेक समय नेपालीहरुलाई निलेको निल्यै छौ तर खै आजसम्म किन केहि दिन नसकेको ? कि मर्नेहरुको मुल्य तिमीलाई थाहा नै भएन । प्रिय त्रिशुली, अब तिमी चुप बस्ने अधिकार नै छैन भनिदेउ केहिले सम्म हामीले तिम्रो नाउँमा बलिदान गर्नुपर्ने हो ? नेपालका जननेता मदन भण्डारी तिमीले खायौं, अस्तिभर्खर पूर्वगृहमन्त्री माधव घिमिरे खायौ, भरखर जन्मिएका साना नावालाकहरु तिमीले खायांै, देशको लागि केहि गर्ने सपना बुनेका सयौं युवाहरुलाई तिमीले खायौं, तिमीले हरेक बर्गका मानिसहरुलाई बसेर्नी कतिको सङख्यामा खाएकी छौं त्यसको हिसाव नै छैन । त्यसको बदलामा न तिमीले केहि पाएकी छौं । यदि तिमीले केहि पाएको भए आज नेपालीहरुका सामु भन्देउ प्रिय त्रिशुली । मानिसहरुको रगत तिम्रो मुहार लत्पताउने कोशिस अब नगर । केहि दिन अगाडी नेपालको पुर्ब मन्त्रीलाई पनि तिमीले निलेको कुरा बिर्सिएकी छैनौं होला । देशको पुर्व बिशिष्ट मानिसलाई त तिमी पत्तै नहुने गरी देशको सबै सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गर्दा फेला नपारिने गरि लुकाउन सक्ने रहिछौं भने आम सामान्य नागरिकहरु त तिम्रो काखमा कति लुके लुके ? प्रिय त्रिशुली अब बोलिदेउ हामीले तिम्रो नाम कति बलिदानी गर्नुपर्ने हो । आफ्नी आमालाई मुक्तीनाथ दर्शन गराएर फर्किएकाहरु मात्रै होईन तिमीले रोजगारीमा गएका मानिसहरुलाई निलेकी छौं । घरपरिवारको सपना पुरा गर्नको लागि हिडेका मानिसहरु निलेकी छौं । परदेशबाट घर फर्किएकाहरु आफ्न्त भेट्न नपाई बिच बाटो मै निलेकी छौं । यस्ता अनेक सन्दर्भमा तिमीले निलेकाको हिसाब नै छैन् । प्रिय त्रिशुली तिमी अब बोल्नुपर्छ र जसरी पनि बोल्नुपर्छ ? हामीले क का लागि बलि दिनुपर्ने हो ? त्यसको कारण तिमीले जवाफ दिनुपर्ने छ ।
कुनै काममा हिडेकालाई बिगतमा आतंककारीहरु तथा राज्यका मानिसहरुले छापेको जस्तो गरि चिलले चल्ला झै टपक्प टिपेर पानी मुनी लुकाउने तिमी को हो ? त्यो बारेमा पनि तिमी बोल्नुपर्छ । होईन भने कहिले राती, कहिले बिहान गर्दै जुन समयमा पनि तिमीलाई स्वाद लाग्दा टपक्क टिपेर निर्दोस मानिसहरु लुकाउने तिमीलाई कुनै अधिकार नै छैन् । प्रिय त्रिशुली, काख कि आमा टिपेर छोराछोरी टुहुरो बनाउने तिमी को हो ? समाजको अगुवालाई टिपेर समाज नै टुहुरो बनाउने तिमी कोहो ? बाबा आमा, श्रीमती तथा परिवारको खुसी खोज्न परदेश हिडेको एउटा ईमान्दार मानिसलाई बिच बाटोमा खोस्ने तिमीलाई कसले अधिकार दियो ? के यसको जवाफ अब तिमीले दिन पर्दैन ? अब पनि यस्तै भए प्रिय त्रिसुली तिमीलाई हामी नेपालीको रगत खाने अधिकारबाट बन्चित गर्न आन्दोलनको आँधि बेहरी ल्याउनु पर्ने छ । होईन भने भनिदेउ प्रिय त्रिशुली आजसम्म तिमी कति मानिसहरु निलेकी छौं ।
कुस्मा, पर्वत ।
पुष्पाञ्जलि रेडियोका अध्यक्ष सुदर्शन शाक्यलाई मातृशोक !
अनिश शर्मा गैरे, वामी गुल्मी २०७३ असोज १२ । सामुदायिक रेडियो पुष्पाञ्जलीका अध्यक्ष सुदर्शन शाक्यलाई मातृशोक परेको छ । अध्यक्ष शाक्यकी ममतामयी माता स्व. गोमा कुमारी शाक्यको हिजो राती साढे १० बजे ७८ बर्षको उमेरमा दुखद निधन भएको हो । लामो समयदेखी अस्वस्थ्य रहनुभएकी शाक्यको आफ्नै निवास वामी टक्सारमा निधन भएको हो । १९९६ साल जेठ १५ गते जन्मिएकी स्व. शाक्यका ३ छोरा तथा २ बहिनी छोरी छन् ।
शोकको यस घडीमा सामुदायिक रेडियो पुष्पाञ्जलीले शोक सन्तप्त परिवार जन प्रति समबेदना प्रकट गर्दै रेडियोको प्रशारण अपरान्ह १ बजे सम्म बन्द गर्ने र त्यसपछी शोक धुनहरु बजाउने रेडियोका कार्यकारी प्रमुख कौरब खत्रीले जानकारी दिए ।
यसैबिच आजै बिहान साढे ९ बजे स्व शाक्यको अन्तिम संस्कार गरिएको छ ।
लोकदोहोरी प्रतिष्ठानको अध्यक्षमा भारी बहुमतले पगेनी निर्वाचित !
तजबिज खबर/ बागलुङ २०७३ असोज १२ । काठमाडौँमा सम्पन्न राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालको नयाँ कार्यसमितिको निर्वाचनमा गायक बद्री पगेनी ८८८ मत प्राप्त गरी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । उनले निकटतम प्रतिव्दन्दी बागलुङका गायक विष्णु खत्रीलाई ३८० मतको अन्तरले पराजीत गरेका हुन् । गायक खत्रीले जम्मा ५०८ मत ल्याएका थिए भने अध्यक्ष पदका अर्का प्रत्याशी टिकाराम चपाईँले जम्मा ३३० मत प्राप्त गरेका थिए ।
समितिको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रमेश विजी, प्रथम उपाध्यक्षमा पशुपति शर्मा ९निर्विरोध० व्दितीय उपाध्यक्षमा रामजी खाँड, महासचिवमा सुवास के। सी। उपमहासचिवमा चोलेन्द्र पौडेल, सचिवमा शंकर बिसी, खुमन अधिकारी र कृष्ण रेउले विजयी भएका छन् । कोषाध्यक्षमा दीपक खड्का ९निर्विरोध० सहकोषाध्यक्षमा टीका पुन विजयी भएकी छिन् ।
सदस्य खुला सदस्य पदमा शिव हमाल, पार्वती राई, राजु ढकाल, कुलेन्द्र विश्वकर्मा, राजन ठकुरी, वसन्त थापा, सन्तोष आलेमगर, जीवन दाहाल, हरि डाँगी, प्रचण्ड जीसी, रमेशराज भट्टराई, ईश्वरी प्रसाद भुसाल, राजन गुरुङ, विनोद बाजुराली विजयी भएका छन् । खुला सदस्यतर्फ १४ जनाको लागि ३४ जनाको उम्मेदवारी परेको थियो ।
महिलातर्फ देवी घर्ती, मुना थपामगर, पूर्णकला बिसी, जमुना राना, जानकी तारमी मगर विजयी भएका छन् । महिला उपाध्यक्षमा रिता थापामगर र महिला सचिवमा राधिका हमाल निर्विरोध निर्वात भएका थिए ।
त्यस्तै प्रदेश नं। २ संयोजकमा कृष्ण प्रसाद गौतम, प्रदेश नं। ३ संयोजकमा रमिला न्यौपाने, प्रदेश नं। ४ संयोजकमा तारापति सुवेदी, प्रदेश नं। ५ संयोजकमा लक्ष्मण खड्का, प्रदेश नं ७ संयोजकमा सुरत रावत रहेका छन् । प्रष्ठिानको महाधिबेशन असोज ८ गते बाट सुरु भएको थियो ।
शोषणबाट मुक्ति पाउन दलित आन्दोलनलाई सशक्त बनाउन आवस्यक !
September 28, 2016 कोपिला कँडेल	Leaveacomment
कोपिला कंडेल, बागलुङ २०७३ असोज १२ । नेकपा माओबादी केन्द्र निकट नेपाल दलित मुक्तिमोर्चा बागलुङको सम्मेलन आयोजक समितिको संयोजकमा लाल बहादुर परियार चयन गरेको छ । मोर्चाको हिँजो आयोजित एकता भेलाबाट संयोजकमा परियार सहित ९१ सदस्यीय जिल्ला सम्मेलन आयोजक समिति गठन गरिएको हो ।
भेलाले २७ सदस्यीय सचिवालय समिति गठन गरिएको मोर्चाले जनाएको छ । त्यसैगरी मोर्चाले संगठनात्मक कामलाई प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउनका लागि कार्य बिभाजन समेत गरेको छ ।
भेलाबाट जिल्लाको दक्षिण क्षेत्रका लागि संयोजक लाल बहादुर परियार, बागलुङ नगरपालिकाको लागि टिका बिक, गल्कोट क्षेत्रका लागि दिल बहादुर परियार र बुर्तिबाङ्ग क्षेत्रका लागि कुविर बिकलाई जिम्मा लगाईएको मोर्चाले जनाएको छ ।
मोर्चाले आज देखीनै सदस्यता नबिकरण बिस्तार र संगठन सुदिढिकरण कार्यक्रमलाई शसक्तरुपमा अगाढी बढाउने निर्णय गरेको संयोजक परियारले बताए ।
भेलाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै नेकपा माओबादी केन्द्रका पोलट्ब्युरो सदस्य एबं प्रदेश नम्वर ४ का दलित बिभाग प्रम्ुख भक्त बहादुर रसायलीले दलित समुदायले आर्थिक र सामाजिक सोषण बाट मुक्ति पाउनका लागि दलित आन्दोलनलाई सशक्त बताएका थिए । पछिल्लो समयमा दलित समुदायको हकहित सम्बन्धी केही सकरात्मक कुराहरु उठान भएको भन्दै दलित अगुवा रसाईलीले संबिधानमा प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्दै थप आन्दोलन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले राज्यका हरेक संरचनामा दलित समुदायको अर्थपुर्ण सहभागिता हुनुपर्ने दाबी गरेका थिए ।
त्यसैगरी नेकपा माओबादी केन्द्रका पोलिट्ब्युरो सदस्य एबं जिल्ला ईन्चार्ज चन्द्र बहादुर बुडा सागरले दलित दलित लगायत सम्पुर्ण उत्पीडित उपेक्षित वर्गका हक अधिकार सुनिश्चीत गर्नका लागि संबिधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए । दलित समुदायको मुक्तिको लागि नेकपा माओबादी केन्द्रले बिगत देखीनै बिभिन्न आन्दोलनको सुरुआत गरेको चर्चा गर्दै उहांले दलितका मुद्धालाई सबैले साझा अभियानको रुपमा अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी नेपाल दलित मुक्तिमोर्चाका ४ नम्वर प्रदेश संयोजक भिम बहादुर बिकले समाजमा अझै छुवाछुत जस्तो जघन्य अपराध कायमै रहेकोले सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा नेकपा माओबादी केन्द्रका केन्द्रिय सदस्य व्दय यज्ञबल्लभ शर्मा बिद्रोही र राजिव घिमिरे, नेपाल दलित मुक्तिमोर्चा ४ नम्वर प्रदेशका सह संयोजक दिल बहादुर परियार, र अनेम सघं क्रान्तिकारीका केन्द्रिय सचिवालय सदस्य टिका बिक लगायतले शुभकामना मन्तब्य ब्यक्त गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रम नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा बागलुङ्गका अध्यक्ष लाल बहादुर परियारको अध्यक्षता, सदस्यराज कुमार बोसेलको स्वागत मन्तब्य र खगेन्द्र बिकको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।